Black Friday: kan ugu fiican warbaahinta badan, qalabka iyo qalabka la xidho | Warka Gadget
El Black Friday Waxay ku dhowdahay geeska, sida aad si fiican u ogtahay, waxaa loo dabaaldegaa Jimcaha soo socda, Noofambar 26, si kastaba ha ahaatee, inta badan dalabyada ayaa horeyba loogu heli karaa goobaha iibka ee internetka ee ugu muhiimsan iyada oo ujeedadu tahay fududaynta wax iibsiga Christmas ee dhammaan isticmaalayaasha.
Waxaan kuu keenaynaa heshiisyada ugu fiican ee qalabka, kuwa la xidho iyo agabka warbaahinta badan si aad uga faa'iidaysato Jimcahan Madoow. Nala baro sida aad u badbaadin karto inta ugu badan, iyo sida aad uga faa'iidaysan karto inaad wax ka iibsato kirismaska ​​​​weyn adigoon u baahnayn kaarka deynta si uu u dhammeeyo qiiqa.
1 La soco AOC Gaming U28G2AE/BK
2 Huawei MateView - Ku habboon shaqada
3 Huawei Watch 3, saacad wareeg ah
4 Amazon Fire HD 10 - Wanaagsan, quruxsan, oo jaban
5 Anker PowerConf C300 si loo horumariyo wicitaanada fiidyaha
6 Qalabka ciyaaraha HyperX ee qiima dhimis
7 CS3040 M.2 SSD ee PS5 iyo PC
Waxaan ku haynaa kormeerahan IPS LCD guddi leh daahan ka-hortagga dhaldhalaalka iyo 16: 9 dhinac oo ay weheliso iftiinka dambe ee WLED kaas oo noo ogolaanaya inaan si buuxda uga faa'iidaysano goobaha ku dhow HDR buuxa. Dhankeeda, waxaan leenahay dhalaalka ugu badan ee 300 nits taas ayaa naga dhigaysa in aan ka horrayno waxa muuqda. Marka lagu daro 60Hz, sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan leenahay 85% ee heerka NTSC iyo 119% ee heerka sRGB sidaas darteed waxay sidoo kale ku habboon tahay in lagu tafatiro.
Dhanka isku xirnaanta, waxaan leenahay laba dekedood oo HDMI 2.0 ah iyo deked DisplayPort 1.2 ah oo ay la socoto soo saarista taleefoon isku-dhafan oo 3,5-milimitir ah. Intaa waxaa dheer, waxaa la socda nidaamka dhawaaqa 3W stereo ku filan maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaad ku iibsan kartaa qiimo dhimis 10% Amazon ah 323,90 euro, qiimaha ugu fiican iyo bixinta hal maalin gudaheed. Soo jeedin xiiso leh oo loogu talagalay Black Friday kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysato kormeerahaan iska difaacaya labadaba jawiga shaqada iyo ciyaaraha.
Huawei MateView - Ku habboon shaqada
Huawei MateView waa kormeere kaas oo ay ugu wacan tahay qaabkiisa, naqshadiisa iyo sifadiisaba kuu ogolaanaya inaad horumariso wax soo saarkaaga habka ugu "premium". DWaxaan haynaa 28,2 inji oo 4K + xallin ah (3.840 x 2.560) kaas oo isku daraya farsamada HDR400, waayo tan wuxuu u adeegsadaa a 500 talooyin iftiin, ka sarreeya heerka suuqa ee guddigan oo kale. Waxaan haynaa qiimeyn cabbir ah "kaliya" 60 Hz taas oo ina xusuusineysa inaan wajahayno kormeere diirada saaraya wax soo saarka, iyo saamiga 1.200: 1 isbarbardhig.
Waad ku samayn kartaa iyadoo qiimo dhimis 15% ah lagu sameeyay Amazon, iyo sidoo kale si toos ah dukaanka Huawei.
Huawei Watch 3, saacad wareeg ah
Midka ugu horreeya ee xirashada waa Huawei's Watch 3 waa Huawei's smartwatch oo markii ugu horreysay ku socda Harmony OS 2.0 nidaamka qalliin ee astaanta u gaar ah oo ka saari kara Google's wearOS sababtoo ah waxqabadkiisa weyn.
Waxay leedahay dareemayaasha ugu muhiimsan sida dareemayaasha oksijiinta, garaaca garaaca, heerkulka iyo xitaa altimeter iyo kuwa kale, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran. hadda kaliya € 279 taas oo qiimo dhimis ah 90 euro.
Beddelka kale ee xiisaha iyo jaban waa kan Huawei Band 6, Ma ka filan karno howlo dheeri ah, waxaan leenahay jijin cabiran oo ku garaacda kuwa kula tartamaya qaabeynta iyo shaashadda qiimo dhan 34,90 euro oo ahDaacadnimo, waxay iga dhigaysaa inaan gabi ahaanba meesha ka saaro tartanka oo dhan.
Amazon Fire HD 10 - Wanaagsan, quruxsan, oo jaban
Waxaan helnaa kiniin 10,1-inch ah, qalab xaddidan iyo sidoo kale qiimihiisu iyo dalab xiiso leh oo loogu talagalay gaar ahaan isticmaalka waxyaabaha ku jira, ha ahaato meelaha ay bixiso Amazon lafteeda ama bixiyeyaasha dibadda.
Waxaan ku haynaa processor sideed-core ah oo si cadaalad ah u xannibay 2,0 GHz iyo 3GB ee RAM, oo ay la socoto 32 ama 64 GB kaydinta gudaha iyadoo ku xiran nooca la doortay. Qalab si cadaalad ah loo isticmaalo 144,99 euro oo ku jira dalabkan Jimcaha Madoow Waxay ina siisaa sifooyin la mari karo iyo marka loo eego qiimaha.
Anker PowerConf C300 si loo horumariyo wicitaanada fiidyaha
Shaki la'aan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qalab rasmi ah kulamadayada shaqada mahadnaqa tayada makarafoonkeeda iyo kala duwanaanta ay na siiso, haddii aad go'aansato inaad ku sharraxdo Anker PowerConf C300 shaki la'aan inaadan khaldami doonin, illaa iyo hadda, kan ugu fiican waan isku daynay. Ka hel 79 euro oo leh qiimo dhimis 38% ah Amazon.
Waxaan awood u yeelan doonaa inaan hagaajino saddex xagal daawasho oo ah 78º, 90º iyo 115º, iyo sidoo kale xulashada inta udhaxeysa seddex sifo qabasho inta udhaxeysa 360P iyo 1080P, maraya suurtagalnimada in la isku hagaajiyo FPS, la dhaqaajiyo lana joojiyo diiradda, ah HDR iyo a Shaqada Anti-Flicker aad u xiiso badan, oo dhan iyada oo loo marayo fiilada USB-C.
Qalabka ciyaaraha HyperX ee qiima dhimis
Waxaan ku bilownay kiiboodhka Hyper X Alloy Core oo leh 105 furayaal iyo miisaan sare oo ay ugu wacan tahay dhismihiisa birta ah. Hayso USB 2.0 iyo xawaaraha codbixinta ee 1.000 Hz, sida cad waxay leedahay nidaamka anti-ghosting-ka ee furaha badan, isla markaana waxay leedahay furayaal loogu talagalay xakamaynta warbaahinta. iyo sidoo kale "qaabka ciyaarta".
Dhanka Pulsefire Core waxaan leenahay dareemayaasha Pixart PAW3327 oo leh qaraar ah 6.200 dpi iyo taxane hore oo leh badhanka sare ee 800/1600/2400 iyo 3200 dpi marka loo eego dhadhanka isticmaale kasta. Xawaaruhu waa 220 IPS iyo dardargelinta ugu badan waa 30G. Aynu tooganno 7 badhamno, kuwaas oo dammaanad qaadeysa cimri dhererkiisu yahay 20 milyan oo guji.
CS3040 M.2 SSD ee PS5 iyo PC
Este XLR8 CS3040 waa M.2 NVMe SSD Jiilka XNUMXaad oo leh heatsink aad u weyn oo isku dhafan. Lagu soo bandhigay saddex nooc oo kaydinta: 500GB, 1TB, iyo 2TB. Xaaladeena, waxaan falanqeyneynaa nooca 1 -da qaaxada waana inaan sheegnaa inay na siisay natiijo wanaagsan.
Waxaas oo dhami waxay nagu siinayaan warqad ilaa 5.600 MB / s marka loo eego waxqabadka akhriska, iyo ilaa 4.300 MB / s marka la eego waxqabadka qorista. Imtixaannadeenna, sida aad ka arki karto fiidiyaha hogaaminaya dib -u -eegistaan, waxaan ka gudubnay qiyaasta xawaaraha akhrinta, oo xawaaraha qorista waa la buuxiyay.
qiimuhu waa qiimo dhimis 36% ah oo Amazon ah nooca 500 GB wuxuuna ku haray kaliya 96 euro, dalab aan macquul ahayn in la diido.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Black Friday: Waxa ugu fiican warbaahinta badan, agabka iyo kuwa la xidho